Raw Tianeptine Powder (66981-73-5) Ndị na-emepụta ya - Phcoker Chemical
Tianeptine ntụ ntụ bụ nootropic na antidepressant na-ahọrọ serotonin re-uptake enhancer (SSRE). Ọ bụ n'ozuzu …… ..
Raw Tianeptine ntụ ntụ (66981-73-5) video
Tianeptine ntụ ntụ bụ onye na - emepụta ọgwụ na - ahụ maka profaịlụ neurochemical.Raw Tianeptine ntụ ntụ apụtaghị na ejikọta ya na mmerụ ahụ, psychomotor, ụra, ọrịa obi ma ọ bụ mmetụta nke anụ ahụ ma nwee oke ala maka mmegbu. Ụdị Tianeptine na-acha uhie uhie nwere profaịlụ pharmacokinetic dị mma. Ọ naghị edo onwe ya n'okpuru ọgwụ mgbochi ọrịa na-ebute ụzọ, nwere nnukwu bioavailability na oke nkesa, a na-ewepụ ya ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na nke a na-enye uru maka raw Tianeptine ntụ ntụ n'elu ndị na-agwọ ọrịa tricyclic na-ekwu banyere ntinye ọgwụgwọ, mgbanwe ọgwụgwọ na mmekọrịta ọgwụ ọjọọ, iwepụ ya ngwa ngwa na-eme ka ịrapara n'usoro usoro ọgwụgwọ dị mkpa. Ụdị Tianeptine dị iche na-adabere na ọtụtụ antidepressants n'ihi na usoro nje P450 cytochrome na-adịghị emetụta ya, nke na-egosi na o nweghị ike ịṅụ ọgwụ ọjọọ; nke a bụ mmasị nke ndị agadi.
Raw Tianeptine ntụ ntụ (66981-73-5) Smmezi
Product Name Ụda Tianeptine
Chemical Aha Ụda Tianeptine; 66981-73-5; 72797-41-2; Cheneptine ntụ ntụ Acid; Ụda Tianeptine
Klaasị ọgwụ ọjọọ ọnọdụ ịda mbà n'obi
molekụla Fnhazi C21H25ClN2O4S
molekụla Wasatọ 436.951 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 436.122 g / mol
Mgbu Point 148
Esi mmiri 609.2
Antinye Ọ bụ ọgwụ eji eme ihe maka ịgwọ nnukwu mbà n'obi (dị nwayọọ ma ọ bụ dị njọ).
Ụdị Tianeptine na-acha uhie uhie (66981-73-5) Nkọwapụta
Ụkwụ Tianeptine bụ ọgwụ eji eme ihe iji meziwanye ihe mgbaàmà nke nsogbu ịda mbà n'obi (UN). E jiriwo ya mee ihe iji nyere aka na-arịa ụkwara afọ na ụkwara ume ọkụ. N'ịbụ nke a na-ahazi, a na-ekewa ya dị ka tricyclic antidepressant (TCA), Otú ọ dị, ọ nwere ụdị pharmacological dị iche iche karịa ụdị tricyclic antidepressants. A chọtara Tianeptine na nke French French Medical Research na 1960s chọpụtara. Aha aha ya bụ Stablon, Coaxil. Tatinol, Tianeurax, na Salymbra.
Ụkwụ Tianeptine apụtaghị na ọ ga - ejikọta ya na mkparịta ụka, psychomotor, ụra, mmetụ ma ọ bụ mmetụta nke anụ ahụ ma nwee oke ala maka mmegbu. Ụdị Tianeptine na-acha uhie uhie nwere profaịlụ pharmacokinetic dị mma. Ọ naghị edo onwe ya n'okpuru ọgwụ mgbochi ọrịa na-ebute ụzọ, nwere nnukwu bioavailability na oke nkesa, a na-ewepụ ya ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na nke a na-enye uru maka raw Tianeptine ntụ ntụ n'elu ndị na-agwọ ọrịa tricyclic na-ekwu banyere ntinye ọgwụgwọ, mgbanwe ọgwụgwọ na mmekọrịta ọgwụ ọjọọ, nkwụsị ya ngwa ngwa na-eme ka nrube isi n'usoro usoro ọgwụgwọ dị mkpa. Ụdị Tianeptine dị iche na-adabere na ọtụtụ antidepressants n'ihi na usoro nje P450 cytochrome na-adịghị emetụta ya, nke na-egosi na o nweghị ike ịṅụ ọgwụ ọjọọ; nke a bụ mmasị nke ndị agadi.
Na nso nso a, Tianeptine dị na mba Europe, Asia, na South America. A machibidoro ya iwu na United Kingdom, ndị dọkịta na United States adịghị agwọ ya.
Ụkwụ Tianeptine (66981-73-5) Ngosipụta nke Action
Nnyocha ndị a na-adịbeghị anya na-atụ aro na omume dianeptine dị ka agonist zuru oke na onye na-anabata opioid (MOR). A na-amụrụ ndị na-anata opioid ugbu a dị ka ihe dị irè maka mgbatị ọgwụ antidepressant. A na-ekwenye na ọ bụ ụbụrụ nke ndị na-anabata ya na-akpata mmetụta dị njọ nke tianeptine. Na mgbakwunye na ihe ndị o mere na onye na-anabata onye na-ahụ maka opioid, nchọpụta ndị gara aga ejiri ya mee ihe na ndị na-anabata respo dopamine (D2 / 3) na ndị nabatara glutamate.
Tianeptine ntụ ntụ bụ ihe pụrụ iche na-egbochi antidepressant na ọgwụ nchegbu na-akpali akpali nke serotonin (5-hydroxytryptamine; 5-HT), na 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) n'ime ụbụrụ anụ ahụ.
Ọ bụ ezie na serotonin neurotransmitters (5-HT), noradrenaline (NA) na dopamine (DA) na-egosi na ha nwere nsogbu nke ịda mbà n'obi, ọ ghọtara ugbu a na monoamine deficits ezughị iji kọwaa usoro usoro nke antidepressant ọgwụ.
Njikere Tianeptine (66981-73-5)
Ian Tianeptine meziwanye ihe mgbaàmà nke nnukwu ịda mbà n'obi (UN)
Tianeptine na-enyere aka mgbu ọrịa afọ na ụkwara ume ọkụ
Tianeptine na-eme ka obi dị jụụ ma na-eme ka nchekasị kwụsị.
Tianeptine na-eme ka serotonin ụbụrụ na-amịrị ihe
Tianeptine na-eme ka mkpali, na-elekwasị anya na mmata, na-egbochi nchekasị, na-eme ka ọ dị ọhụrụ ma na-ebelata ike ọgwụgwụ.
Akwadoro Tianeptine ntụ ntụ (66981-73-5) Ụdị
A na-edekarị ntụ Tianeptine na ọgwụ nke 12.5 mg ma were ya ugboro atọ kwa ụbọchị. N'adịghị ka ndị TCA ndị ọzọ na ndị na-emechi serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), ọ dịghị mkpa ka doaneptine doses mụbaa nwayọ nwayọ ma taper mgbe a kwụsịrị ọgwụ ahụ achọghị.
Mmetụta dị na ntụ ntụ Tianeptine (66981-73-5)
Mmetụta mmetụta nke tianeptine ntụ ntụ bụ ihe ijuanya na oke. Tụnyere ndị ọzọ TCAs na ọbụna SSRI klas nke antidepressants, tianeptine ntụ ntụ bụ fọrọ nke nta na-enweghị mmetụta. N'agbanyeghị profaịlụ mmetụta dị nro dị nro, ọ dị mkpa ka ị ghara ịgwakọta tianeptine na ndị na-eme ihe mgbochi monoamine ma ọ bụ ndị ọzọ na-egbochi antidepressants dịka njikọta nwere ike ịdị egwu ndụ. E kwesịghị ịgwakọta Tianeptine na ọgwụ na-akụnwụ ahụ na iji ya eme ihe kwesịrị ịkwụsị 24-48 tupu ịwa ahụ chọrọ ị requụ ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ mgbochi. Ndị a bụ ole na ole n'ime mmetụta ndị ọzọ na-enwekarị metụtara tianeptine.
▲ afọ ọsịsa
▲ akọrọ ọnụ
▲ ike ọgwụgwụ
▲ ehighị ụra nke ọma
▲ Mgbanwe nke agụụ
▲ Mmetụta ịda mbà n'obi
▲ bịara ikiri ọhụụ
▲ Mbelata nwayọ ụgbọala